CAALIMKA WEYN EE SHEEKH C/RAXMAAN AW AXMED OO SI XEEL DHEER UGA HADLAY TAHRIIBKA | Toggaherer's Weblog
Caalimka Weyn ee Reer Somaliland ahna Imaamka iyo Khadiibka Masjidka Jaamicul Iimaan ee xaafadda 18 May Ex OCtober Sidoo Kalena Tafsiirka ka dhiga Masjidka Weyn ee Cali Mataan ee Badhtamaha Hargeysa Sheekh Cabdiraxmaan Aw Axmed Cabdi oo ka hadlay Tahriibka sharaxaad xeel-dheer ka bixiyey shareecada islaamku waxa ay ka qabto Ficillada la xidhiidha hawlaha tahriibka.
Sheekh Cabdiraxmaan Aw Axmed Cabdi oo ka mid ah Culimo Aw Diinka Somaliland ayaa shaaca ka qaaday in tahriibku diiniyan xaaraan yahay, isla markaana waxa uu tilmaamay in ilaahay kala xisaabtami qof kasta oo naftiisa ku waaya hawlaha tahriibka, waxaana uu masuuliyiinta Somaliland u soo jeediyey in ay abuuraan qorsheyaal wax lagaga qabanayo tahriibka oo halkii ugu xumayd waqti-xaadirkan maray.
Sheekhu waxa uu Sidaa ka sheegay khudbad uu maanta ka akhriyay Salaadii Jimce Masjid-Jaamicul Imaan oo ku yaala maagalada Haragaysa. Waxaana uu sharaxaad xeel-dheer ka bixiyey shareecada islaamku waxa ay ka qabto Ficillada la xidhiidha hawlaha tahriibka.
“Waxaan jeclahay in aan maanta ka hadlo shareecada islaamku maxay ka qabtaa ficilada Tahriibka oo maanta halkii ugu xumayd maraya, iyada oo aynu maalin kastana ka dhegaysano idaacadaha intaas oo qof ayaa bed helaayo Dooni kula qaraqantay, runtii waa wax si aad iyo aad ah looga naxo, waana mushkilad ka mid ah dhibaatooyinka inagu habsaday.” Sidaa Ayuu hadalkiisa ku bilaabay Sheekh Cabdiraxmaan Aw Axmed.
Waxaana uu intaa raaciyey oo uu yidhi “Sideedaba Tahriibku waa ficil ku salaysan isdilid, Diinta islaamkuna ma ogola in qofku is dilo oo naftiisa waxyeelo gaadhsiiyo. Waxaana ilaahay [SXWC] Kitaabkiisa qur’aanka ah ku yidhi ‘Nafahiina ha ku tuurridina mahlakado’, waxaana mahalakahaasi noqon koraan qaar qofka nafta ka jaraya iyo kuwo waxyeelo soo gaadhsiiya, waxaa kaloo ilaahay Aayad kale ku yidhi ‘Hadilina Nafahiina, ilaahay waa ka mar walba idiin naxariisanaye’ marka labadaas Aayadood si qoto-dheer loo tix-raaco, waxaa cad dadka tahriibayaa in ay nafahooda halis-gelinayaan, in ay nafahooda dilayaan, Sidaa darteed waa xaaraan ficilka tahriibku, maadama oo uu halis, dhimasho iyo khatar kale oo xunba dadka ku keeno.”
Sheekhu waxa uu intaa raaciyey oo uu yidhi “Qofka Tahriibaha ah ee noloshiisa ku waaya saxaraha ama Badd-weynta uu isku maqiiqayo ilaahay wuu kala xisaabtami doonaa naftiisa uu dilay ee uu khatarta-geliyey. Markaa waxaa laagama maar maan ah in qofkastaaba Sidaa maanka ku hayo, oo uu ka reebtoonaado kana fogaado ficilkasta la xidhiidha hawlahaTahriibka.”
Mar uu Sheekh Cabdiraxmaan Aw Axmed ka hadlayay arrimaha sal-dhiga u ah ee qaybta laxaadka leh ka qaata ficilada Tahriibka, waxa uu yidhi “Hawlaha Tahriibka waxaa door-weyn ka qaata dhawr arrimood ay ka mid yihiin; waa ta kowbaade Qaybo badan oo ka mid ah Waalididiinta dhashay da’yarta Tahriibaysa oo gabay masuuliyadii ka saarnayd Ubadkooda, isla markaana aan wax talo iyo wax-sheegmotoona aan ku kordhin, waa ta labaade masuuliyiintii wadanka oo aan u soo jeedin in ay wax-ka-qabtaan dhibaatada Tahriibka, waayo ma jiro wax qorshe ah oo ay ugu talo-galeen dhaliyartaa Tahriibaysa. Waxaana ay ahayd in ay abuuraan barnaamijyo door-weyn ka ciyaara xakaynta iyo wax-ka-qabashada ficilada Tahriibka.”
Sheekh Cabdiraxmaan Aw Axmed waxa uu tilmaamay haddii laga gil-gilan waayo, isla mar ahaantaana wax laga qaaban waayo dhibaatadaas Tahriibka ee dadkii ku hoobteen in ay natoojiiyin xun-xun oo kale ka buurmi doonaa, lagan shallayn doono waqti aan hada ahayn.
Ugu dambayntiina waxa uu talooyin u soo jeediyey dhinacyda ay ka midka yihiin Dawlada, Waalidiinta iyo Warbaahinta;
Mar uu Dawlada la talinayey waxa uu yidhi “Waxaan u sheegayaa Masuuliyiinta wadanka [Dawlada] in illaahay kala xisaabtami dadkan iyo dalkan ay masuulka ka yihiin sidii wax ugu qabteen, sidii u guteen wajibaadkii wax-qabad ee ka saarnaa. Dadkaa Tahriibaya ee Badaha isku daadinaya iyaga ayaa masuul ka ah, waxaana looga baahan yahay in ay diyaariyaan qorshihii dadkaas laga baajin lahaa Tahriibka, waxaa looga baahan yahay in ay abuuraan barnaamijyo wacyi-gelin ah, waxaa looga baahan yahay in dadka jiheeyaan oo camal [shaqaooyin] u abuuraan, loogama baahna uun in ay Kursiga iyo danahooda ilaashadaan. Hana ogaadaan in maalin aan maanta ahayn oo ay Illaahay hortii ay ku sugan yihiin in la waydiin doono dadkii ay masuulka ka ahaayeen sidii wax ugu qabteen.”
Sheekhu waxa uu u soo jeedidyey Waalinta dhashay Da’yarta tahriibaysa “Waxaan leeyahay Waalidiinta, waa in aad si joogto ah uga warhaysaan Ubadkiinu waxa ay qabanayaan, meesha ay ku maqan yihiin iyo waxa ay samaynayaanba. Maaha in aad ku mashquushaan uun raadinta biilkooda, ee waa in aad masuuliyad iska saartaan sidii aad Awlaadiina u jihayn lahaydeen, wax ugu sheegi lahaydeen, u baraarujin lahayeen. Maxaaleeyay Ilmuhu inta uu dhalinyarada yahay wax badan oo waayo-aragnimo ah ayaa ka maqan.”
Sheekh Cabdiraxmaan Aw Axmed Warbaahintana waxa uu u soo jeediyey oo uu ydihi “Qolada Warbaahinta waxaan u sheegayaa oo aan lee yahay ‘waad gabteen masuuliayiinii wax-sheegnimo ee bulshada, waxaad ku mashquusheen in aan had iyo goraale ka hadashaan labo garab oo is dhaleecaynaya ama iska soo horjeeda, waxaad ku mashquusheen falanqaynta wararka ku tacaluqa arrimaha siyaasada, waxaad ka tagteen wararkii faraha badnaa ee Arrimaha Bulshada. Sidaa darteed, waxaan Warbaahinta u soo jeedinayaa in ay sameeyaan barnaamijyo wacyi-gelin ah oo wax lagaga qabanayo aafada Tahriibka ee meesha xun maraysa. Waxaa hubaal ah haddii aad si weyn uga hadashaan oo aad bulshada u soo bandhigtaan khatarta dhabta ah ee ka dambaysa Tahriibka in ay dad badani ka joogsan lahaayeen. Kolkaa waa in aad abuurtaan barnaamijyo wacyi-gelin ah” ayuu Sheekhu hadalkiisii ku soo afmeeray.